Admin 3/27/2018 04:22:00 PM
हाम्रो घरको नाममा खरले छाएको एउटा गोठ थियो । त्यहाँ म , मेरी आमा , मेरो दाइ , हाम्री फुपु काली भैंसी अनि बंगुर सम्धि र लाम्काने बाख्री थियौं । जात फरक भए पनि हामी सबै मिलेर बस्थ्यौं , आपसमा सुख , दुख साटासाट गर्थ्यौं । मलाई अचम्म लागिरहेछ चेतनशिल प्राणी भन्ने मान्छेहरु किन एक आपसमा मिल्न नसकेका होलान ?? किन छुट्टा-छिट्टै जातिय राज्य चाहिएको होला ??
म जन्मिदा मेरी आमालाई निकै सकस भएको रे , लामो बेथा लाग्दा पनि म नजन्मेपछि भेट्नरी डाक्टर बोलाएर डेलिभरी गराएका रे । आमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो "सबै मान्छे निर्दयी हुदैनन् , कोही निकै दयालु पनि हुन्छन् , उहाँ डाक्टर नभएको भए सायद तिमीले यो संसार देख्न पाउने थिइनौ छोरी " । गोठमा निकै जाडो हुन्थ्यो , वर्षामा पानी चुहिन्थ्यो , म कुक्रुर्क्क परेर आमाको टाट्नेमा गुटुमुटु पर्थे , मेरी आमाले मलाई सुम्सुमाइ रहनुहुन्थ्यो ।
म हुर्किदै गए , एकदिन मलाई असैह्य भयो , कता कता काउकुती लाग्यो , रातैभरि छट्पटी भयो, म आत्तिएं र आमालाई सुनाएँ , आमा मुसुमुसु हॉस्नु भयो , "छोरी तिमी तरुनी भयौ , अब तिमीलाई ज्वांइ खोज्नु पर्ने भो" नभन्दै भोलीपल्ट मालिकले एउटा इन्द्रधनुषी मान्छे लिएर आए । मलाई हात-खुट्टा बांधेर बटार्नु बटारे , पछि आमाले भन्नु हुन्थ्यो कृतिम गर्भाधान गराएका रे , यसरी म बलत्कृत भएं । मैले संसर्गको अनुभव लिनै पाइन , निकै खल्लो लागिरह्यो ।
हुन त अचेल नेपालमै पनि हामीलाई काटेर खान पाउने नियम-कानुन बनाउदै छन् रे , त्यो कुरा थाहा पाएदेखि मलाई खान पनि मन लागेको छैन , निन्द्रा पनि लाग्दैन । यो चेतनशिल प्राणी मान्छेले हाम्रो दुधबाट दही, मोही, नौनी, घिउ, चिज र हाम्रो मल-मुत्रले फलेका अन्न अनाजले खान नपुगेर हाम्रै छाला किन लुछ्न खोजेको होला ? हाम्रो पनि उनिहरुको जस्तै मन, मुटु र संबेदना हुन्छ, उनिहरुलाई जस्तै हामीलाई पनि दुख्छ भन्ने किन नबुझेको होला, म सोचिरहन्छु ......., अब त उज्यालो पनि हुन लागेछ, भोक पनि साह्रै लागेको छ, बाँ......... ।